Dexzọ Yandex Emepụtawo Oge Ezumike Oge Ekeresimesi Ahụmịhe Dị Iche | RayHaber | raillynews
HomeGeneralDexzọ Yandex Emepụtawo Oge Ezumike Oge Winterkwụ na-enye Ahụmahụ Dị Iche Iche
21 / 01 / 2020 General, Akwụkwọ Ozi Okwu Mmalite, Turkey
yandex navigation mepụtara ụzọ ezumike oyi nke na-enye ahụmịhe dị iche iche
Yandex Turkey kasị ewu ewu na igodo ngwa, dị iche iche na-akpali ụzọ gasị onye ọ bụla ọzọ na ebe oyi na blog na-ike na-eso ụzọ ha. yandexnavigasyon.com.t bụSuggestionszọ kachasị mma nke ụzọ oge oyi ga-adị maka ndị chọrọ ịkwụsị belata ike ọgwụgwụ ahụ n’afọ ma nwee ụmụ ha ahụmihe.
Ọ bụ ezie na oge ọkọchị bụ ihe mbụ na-abata n’uche banyere ezumike na njem, ụzọ ezumike oyi nke na-enye ahụmịhe dị iche iche na-ahọrọ karịa ka ọtụtụ ndị mee atụmatụ njem. N’aka nke ọzọ, Yandex Navigation, onye na-enyere ọtụtụ nde ndị ọrụ nọ n’okporo ụzọ na-enye ọ bụghị naanị ọrụ okporo ụzọ maka njem nchekwa na nke ọma, mana ọ na-enyekwa ndị ọzọ ụzọ maka ndị chọrọ inwe ezumike n’oge udu mmiri.
Uteszọ ndị ọzọ maka ezumike oyi
Na mba anyị, enwere ụzọ ezumike oyi nke a na-enweta ngwa ngwa site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ógbè niile ma na-enye ahụmịhe dị iche iche.
Uludag bụ otu n’ime ebe mbụ batara n’uche mgbe ị na-ekwu maka ezumike oge oyi na peeji nke Yandex, Palandöken, nke na-enye ihu igwe kwesịrị ekwesị maka ịgba ọsọ maka ọnwa 6 nke afọ, Abant Lake Nature Park, nke na-enye ndị ọbịa nke oge niile n'afọ ihe ngosi ọdịdị. Enwere ụzọ ezumike oyi nke na-enye ahụmịhe dị iche iche dịka Kars, otu n'ime obodo ndị ọ hụrụ n'anya na Ilgaz, nke ndị kacha achọ inweta ma ọ bụrụ Oké Osimiri Ojii na ugwu ugwu.
Readgụ edemede: https://yandexnavigasyon.com.tr / na-and-na-na-ihe ka Holiday-A ga-eme na-ebe
Gị na nwa gị nwee ahụmịhe dị iche iche n'oge ezumike ọkara afọ agụmakwụkwọ
Onweghi nhọrọ dị mma karịa njem ezumike ezumike ezinụlọ iji nyere ụmụaka aka ibelata ụlọ akwụkwọ na oke mmụta n'oge ezumike izu abụọ wee malite iji izu ike ememme mmụta ọhụrụ. Onwere uzo uzo ozo site na Eskişehir rue Cappadocia, site na Sapanca rue Izmir maka ndi choro iwepu ike gwụ ha ma nweta umuaka ha na akwukwo ha na Yandex Navigation.
Readgụ edemede: https://yandexnavigasyon.com.com / Mid-SC-tatilinde-ebe-unu na-
Zọ ndaba na uru akụkọ mere eme
Ọtụtụ ebe pụrụ iche ịga na ịchọpụta na Anatolia na-eche ndị njem. Yandex si blog Navigation na Turkey si maa mma na akụkọ ihe mere eme uru nke na-adịbeghị anya amụma ndị dị otú ahụ dị ka ụzọ gasị ebu ọtụtụ pụtara ìhè Göbeklitepe nwekwara ike inwe mmasị.
Dabere na ndị ọkà mmụta ihe ochie, Göbeklitepe, nke aha ya bụ mpaghara na-agbanwe ụzọ nke akụkọ ntolite, bụ ihe a ga-emerịrị na mpaghara ahụ yana ozi gbasara ọkụ na mpaghara na ntanetị blog Yandex Navigation.
Readgụ edemede: https://yandexnavigasyon.com.tr / Göbeklitepe-ebe-how-gaa
Tupu ịme atụmatụ njem, ibe blọọgụ ebe Yandex Navigation na-ekerịta atụmatụ ụzọ maka mpaghara dị iche iche na oge niile https://yandexnavigasyon.com.trEchefula iso!
Yandex Uzo, Yol
Ụzọ Nchọpụta na Ụzọ Amụma Dị Mkpa maka Ndị Ọrụ si Yandex Nsoro
Kpee ikpe nke okporo ụzọ na ọnọdụ okporo ụzọ nke Yandex.
Maapụ iji gosi Ebe Mmasị Na-adọba ụgbọala Yandex Emelitere
Yandex Igodo nke Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai
Ntugharị dị iche site na Tour nke Turkey
Àjà ezigbo oge okporo ụzọ ozi maka ọha iga okporo ụzọ na Turkey
Ndị na-etinye ego na-enye 3 Katlı Büyük İstanbul Tunnel Tender
Nnukwu onyinye nye ESHOT, nke na-enye bọmbụ na-eme njem na gburugburu ebe obibi
Turkey kasị mara mma ụgbọ okporo ígwè ụzọ gasị
Ugbua ụgbọ ala na-agbanyeghị aka na ndị agha mere ọdụ
TCDD n'otu na njikọ, ụgbọ mmiri, kwụ n'ahịrị kere ọdụm
Ogige Abant Lake
Rozọ dexzọ Oge Ezumike Yandex